Fonosana ifandrimbonana amin'ny bozaka
Ireo tontonana ifanakalozan-dresaka vaovao an'i Qomo: rafitra Android 8.0 na rafitra windows azo atao.20 teboka mikasika ary fanoratana isa 10 Habe misy amin'ny 55″ / 65″/75″/86″
Ny fampisehoana tontonana ifandrimbonana dia ampiasaina indrindra amin'ny toeram-piofanana, efitrano fivoriana, tranombakoka ary taova ho an'ny fiarovam-bahoaka.
Fanamarihana: Manohana ny marika Qomo izahay ho an'ny demo raha ao amin'ny famokarana faobe dia manao OEM / ODM
Ao anaty tontonana iray daholo
Ampidiro ao anaty iray ny ordinatera, TV, solaitrabe, Soundbar, Projector ary AD
Ecran LG 4K UHD anti-glare. Fisehoana teknolojia avo lenta. kalitao tsara tarehy. Izay hitanao no azonao
Wireless écran fitaratra
Ny panenay dia manampy anao hizara ny hevitrao eo amin'ny efijery avy amin'ny findainao/kaontinao/solosainao, fifandraisana an-tariby fotsiny amin'ny rindrambaiko Eshare ao amin'ny tontonana.
Interactive multi-touch miaraka amin'ny fahombiazana ambony
20 pts touch. Tohano ny fanoratana loharano sy fanamarihana rehetra. Mamela ny mpampiasa maro hifanerasera amin'ny fotoana iray. Miaraka amin'ny fikasihana malefaka sy mamaly, na iza na iza dia afaka mandray an-tsoratra, manoratra ary manao sary eo amin'ny efijery, ka mahatonga ny efitrano fianarana ho toerana tena iaraha-miasa.
Tongava miaraka amin'ny rindrambaiko fanabeazana maimaimpoana
Ny logiciel white board nomerika an'ny Flow works! pro dia manambatra ny fiarovana amin'ny sehatry ny orinasa miaraka amin'ny loharanon-kevitra fampianarana sy fitaovana annotation an'arivony mba hanatsarana ny fomba fifandraisan'ny ekipanao sy ny fiaraha-miasa.
Ny takelaka fisaka interactive Qomo dia mitondra fahombiazana ho an'ny kilasinao sy ny ekipanao mba hahafahanao mifandray mora foana amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'ny endrika endrika maivana maivana, safidy rafitra Android na Windows, fitaovana mipetaka ary interface tsara ho an'ny mpampiasa manokana, io no vahaolana tonga lafatra amin'ny fiaraha-miasa tsy misy olana any an-tsekoly sy any amin'ny birao.
Fonosana Interactive fonosana:
Ny fonosana mahazatra dia 1pc / 1 baoritra
Raha mila vata hazo ianao hiarovana amin'ny fandefasana LCL dia mila vola fanampiny.
Manaraka: Fampisehoana takelaka fisaka Qomo Bundleboard
teo aloha: Qomo desktop Doc Cam miaraka amin'ny haben'ny tifitra A4
tontonana fisaka interactive mora indrindra
Vidin'ny takelaka fisaka interactive
Board Panel Interactive
vidin'ny tontonana interactive
Angon-drakitra teknika BundleBoard
Boky torolalana ho an'ny mpampiasa